ခေါင်းဆောင်မှုအတိုင်ပင်ခံ | အလုပ်အမှုဆောင်အတိုင်ပင်ခံ | နောက်မြေပုံ
သင်၏လုပ်ငန်းအတွင်း၌သင့်တွင်ရှိပြီးသားကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ကိုသင်အလိုမရှိပါ သင်တန်ဖိုးထားသောအရာမှာသင်ဆန်းသစ်တီထွင်ရန်၊ ရှေ့တန်းမှရပ်တည်ရန်နှင့်ကြီးထွားရန်အတွက်ကူညီရန်ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်အတိုင်ပင်ခံများ၏အကူအညီဖြင့်အပြင်ဘက်ရှုထောင့်နှင့်အခြေအနေဖြစ်သည်။ NextMapping ™မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအတိုင်ပင်ခံကမင်းရဲ့နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်မယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့ကူညီပေးတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ NextMapping ™စီးပွားဖြစ်စီးပွားရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းဆောင်မှုအတိုင်ပင်ခံသည်နောက်နှစ်၊ သုံးနှစ်၊ ငါးနှစ်၊ ဆယ်နှစ်သို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို၍ နောက်လာမည့်နှစ်တွင်သင်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြလိမ့်မည်။
သငျသညျအခွင့်အလမ်းများကိုယူ။ အခြားလမ်းန်းကျင်ထက်, သင့်အဘို့အခွင့်အလမ်း fit ရန်ရှိသည်။ သင်ယူနိုင်စွမ်းသည်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ၏အရေးကြီးဆုံးအရည်အသွေးဖြစ်သည်။
Sheryl Sandberg, COO ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်
NextMapping ဆိုတာဘာလဲ™ ဖြစ်စဉ်ကို?
NextMapping ဆိုတာဘာလဲ™ အတှကျအသုံးပွု?
NextMapping ™ကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖောက်သည်များအလွယ်တကူနားလည်စေရန်နှင့် ၄ င်းတို့၏အခြေအနေနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှုကို၎င်းတို့အားအသိအမှတ်ပြုစေရန်အတွက်၎င်းသည်ရည်ရွယ်ထားသည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ပရိသတ်များကိုရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ပါမည်။
မဟာဗျူဟာ ဦး ဆောင်မှု
စက်ရုပ်၊ AI နှင့် Automation
Tech & ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်း
Online Leadership Consulting သည်အနာဂတ်တွင်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်မိမိတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ခေါင်းဆောင်များအားနည်းပြအထောက်အပံ့ဖြင့်သင်ယူနိုင်သည်။